ILullymore Heritage & Discovery Park - IntoKildare
ILullymore Heritage & Discovery Park
ILullymore Heritage & Discovery Park yi ukuheha izivakashi ngosuku lokuwina okutholakala esiqhingini samaminerali saseLullymore ngemibono ye-panoramic yeBog of Allen edumile. Ukuhamba ngehora elilodwa nje usuka eDublin phakathi kwemizana yaseRathangan ne-Allenwood, iPaki yiyona indawo ephelele yabantu bayo yonke iminyaka yokuphumula nokuphumula.
Kukhona okuthile kwawo wonke umuntu - imindeni efuna ukufunda nokuzijabulisa endaweni ephephile, abathandi bemvelo, abathanda umlando, abahambahambayo nabagibeli bezintambo!
Zonke izivakashi zinenkululeko yokuhlola izimangaliso zemvelo zaseLullymore ezinqamula emigwaqeni emikhulu ehlathini lasendulo elithulele nase-peatland biodiversity boardwalk. Endleleni uzokwambula imibukiso yokuxoxisana exoxa ngomlando ocebile waseLullymore ngezixhumanisi zesikhathi esedlule samaPagane, isiza seMonastic iminyaka eyi-1000, isiphephelo samavukelambuso ngo-1798 nasekhaya kuguquko lwezimboni eminyakeni engama-20th Ikhulu leminyaka. Manje ekuqaleni kwenkathi entsha eluhlaza, iPaki ibonisa izilwane zasendle ezimangalisayo zamagobongo ase-Ireland kanye nobudlelwano obusimeme kakhulu nezindawo eziphakeme zomhlaba.
Ukuzijabulisa komndeni nakho kuqinisekisiwe ngendawo enkulu yokudlala i-adventure yangaphandle kanye negalofu elincane elingu-18, uhambo lwesitimela, ipulazi lezilwane kanye nokuzingelwa kwengcebo yemilingo ukuxazulula. Ukupaka kwamahhala ne-WIFI. Ikhefi enezihlalo ezingaphezu kwama-200, Thenga esizeni nesihlalo esinamasondo.
Ukubhuka ku-inthanethi kubalulekile, sicela uchofoze lapha ukwenza ukubhuka
Le nhlanganisela enkulu yokuzijabulisa nokufunda yenza ukuthi uLullymore abonwe? lapho uvakashela iKildare. Jabulela ukuvakashelwa kwakho bese uthola umlingo weLullymore!
Ukuzidela Nemisebenzi, Amagugu Nomlando, Outdoors, Ukusekelwa Kwasekhaya, Ubumnandi Bomndeni, Imvelo & Izilwane zasendle, Kildare
I-Rathangan, Isifunda iKildare, R51 E036, Ireland.
Kuvulwa ngoMsombuluko - NgeSonto ngo-10 ekuseni - 6 ntambama